Qatar Airways Ground Quarter Yayo Airbus A350 Fleet
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways Ground Quarter Yayo Airbus A350 Fleet
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Qatar Airways inotarisira kuti Airbus ichave yakagadzirisa uye inogadzirisa zvachose mamiriro ezvinhu kusvika kugutsikana kweQatar Airways nemutongi wedu tisati taendesa chero imwe ndege yeA350.
Kuchengeteka uye chengetedzo yevafambi vayo inoramba iri Qatar Airways 'inonyanya kunetsekana.
Qatar Airways iri kushandira pamwe nemakambani ese ekuhaya akanganiswa neA350 grounding iyi.
Qatar Airways yatotora danho kudzorera ayo A330 ngarava kushanda.
Pamusoro pekuongorora kwaro kwese kuona kuchengetedzwa nekuchengetedzwa kwevafambi nendege, Qatar Airways Inoenderera ichinyatso tarisa mamiriro akakosha pane ayo Airbus A350 ngarava umo iyo fuselage pamusoro pazasi pependi iri kuninipisa pamwero wekumhanyisa. Ndege iri kushanda nemudzvanyiriri wayo kuve nechokwadi chekuenderera mberi kwekuchengetedzeka kwevafambi vese uye pahwaro uhwu, uye zvichitevera rairo yakanyorwa yakajeka yemutongi wayo, ndege gumi nenhatu dzave zvino dzakateyiwa, zvichinyatsovabvisa pabasa kusvika panguva yakadai seicho chikonzero chinokonzeresa. kusimbiswa uye mhinduro inogutsa yakaitwa kuti igadzirise zvachose mamiriro ezvinhu ari pasi.
Kuchengeteka uye chengetedzo yevafambi vayo inoramba iri Qatar Airways 'inonyanya kunetsekana. Ndege ichaita zvese zvainogona kuona zvakare kuti vafambi vayo havavhiringidzike nekubviswa kwakatenderwa kwendege idzi pabasa uye ichaedza kutsvaga dzimwe mhinduro dzekupa yakajairwa yepamusoro sevhisi kune vese vanofamba. Qatar Airways yatotora danho kudzorera zvikepe zvayo zveA330 kuti zviite basa nekukasira kugadzirisa zvimwe zvakakanganiswa nendege yeA350 yakadzika uye parizvino iri kutarisa mimwe mhinduro zvakare.
Pamusoro pekutarisa kwendege pakuchengetedza mukurumbira wayo wekupa akakwirisa eruzivo rwevatengi, Qatar Airways iri kushanda nemakambani ese ekurendesa akabatwa neiyi A350 grounding avo vatanga kuongorora nendege dzavanokanganisa.
Mukuru weQatar Airways Group, Anoremekedzwa VaAkbar Al Baker, vakati: "Neshanduko iyi ichangoburwa, tinotarisira nemoyo wese kuti Airbus inobata nyaya iyi nehanya kwayo sezvainoda. Qatar Airways haigamuchire chero chinhu kunze kwendege dzinoramba dzichipa vatengi vayo mwero wepamusoro-soro wekuchengetedza uye chiitiko chakanakisa chekufamba chavanokodzera. Qatar Airways inotarisira kuti Airbus ichave yakonzera chikonzero nekugadzirisa zvachose mamiriro ezvinhu kusvika kugutsikana kweQatar Airways nemutongi wedu tisati taendesa imwe ndege yeA350. ”
Kerala Tourism: Chenesa Chaliyar Rwizi Paddle Zvino
Shanduko yemamiriro ekunze inotyisidzira kugadzikana kwemari kweUS
Bahrain Exhibition & Convention Center ine nyowani ...
Scotland Mhepo Traffic Kudzora Towers Kudzima: Hapana Chirongwa B
Zvirongwa zvakakura zveJamaica Gurukota Rezvekushanya mu ...
Njodzi Njanji Kufamba neVashanyi - Kune ...
Kukura kwedata uye vanopa index vanofambiswa ne ...